Top 10 Tips Pamusoro Pokuti Ungawana Sei Zvakawanda Website Hits - Semalt Advice
Imwe nzira iyo inowanikwa muIndaneti inogona kubudirira ndeyokufambisa motokari yakawanda kune iyo nzvimbo sezvinobvira. Aya mazano gumi anotaurwa naMax Max, Mutengi Wekugutsikana Kwevatereji Semalt , anofanira kuwedzerwa mutengesi wako wose newebsite hits.
# 1. Tumira webhusaiti yacho kumusoro kwevatatu injini yekutsvaga s. NdiGoogle, Bing, uye Yahoo (ikozvino inowanikwa neBing kubva kuMicrosoft). Nzira iyi, vanhu vachawana ruzivo rwekambani pavanoita tsvakurudzo dzavo.
# 2. Ita mavhidhiyo akakurumbira uye ugovaisa kune mavhidhiyo mawebsite. Iva nechokwadi chekuisa URL yako pakutanga nekuguma kwevhidhiyo, uyewo mune tsanangudzo nzvimbo. Mavhidhiyo anokudzidzisa anowana vanhu vakawanda kuti vashanyire nzvimbo.
# 3. Shandisa URL yewebsite paIndaneti. Vanhu vanoona hukama huchada kuvhara pairi uye kuona izvo zvinosanganisira. Chinhu chakanaka pamusoro peChristmas ndechekuti kana vaita saizvozvo, shamwari dzavo dzichaonawo chiito ichi uye dzinoda kuisa pazviri. Ramba uchidzokorora zvinyorwa zviri pawebsite nekugovana zvinyorwa zvitsva uye mapeji kuitira kuchengetedza nguva dzose website traffic . Kugadzira mapeji ebhizinesi pa Facebook zvakarewo.
# 4. Gara uine chokwadi chekuti zvigadzirwa zvakagadzirwa ndezvehutano uye zvadaro zvinozviisa kune zvinyorwa zvinyorwa zvinyorwa. Mune munyori bio bhokisi, nyora kero yewebhu yepaiti kuitira kuti vashandise vaoneke kana vachida zvakapiwa. Inofanirawo kunge yakabatana neyo basa rakapiwa..
# 5. Shandisa URL yewebsite nevateveri vako pa Twitter. Pari zvino, Twitter inotarisana nepamusoro seyo inoshandiswa zvikuru-yebhurogi yepaiti. Mariri, vanhu vanogona kutumira mameseji nenzira ye tweets kuvateveri vavo. Iine simba rakakura kana rakashandiswa zvakakodzera. Pano panewo sarudzo yekuisa zvigadzirwa zvehutano dzevanhu panzvimbo iyo vashandi vanogona kutaurirana zvakananga kune dzimwe nzvimbo sepa Facebook nezvimwewo.
# 6. Uyai nemifananidzo yezvisikwa uye muiise panzvimbo yenyu. Vashandi vanowana mifananidzo yakarereka vachagovana navo kune dzimwe nzvimbo dzakadai sePinterest. Icho chakanaka kuva nemifananidzo yako yakagoverwa pane imwe nzvimbo sezvo iri nzvimbo yepamusoro-yepamusoro yehuwandu hwemagariro evanhu kuitira kugovana mifananidzo. Iyo inoshanda zvakafanana na Facebook ne Twitter, uye nekuda kwekusvika kwayo yakareba, inoshanda sechinhu chakanaka chekushandisa webhusaiti sevanhu vanoona chifananidzo chichatsvaga kuchigovera neshamwari dzavo.
# 7. Tumira webhusaiti yacho kuti inyore majeji eJapan uye zvinyorwa zvekumba. Tarisa mazita ayo anozivikanwa panzvimbo yebasa kana nyika. Kana vanhu varipo vanoita mhinduro inofanirwa neyo webhusaiti yacho, pane mikana yakareba iyo ichadzoka sechikamu chemigumisiro.
# 8. Iva nechokwadi chekuti nzvimbo yacho inowanikwa muchikamu chepamusoro chezvivako. Munzvimbo idzi dzewebsite, muridzi wega wega anoda kuitei ndezvekutumira machezheni avo, ane tsanangudzo yakajeka, asingakanganwi kuisa URL. Apo vanokwanisa vashandi vanoshanyira idzi nzvimbo dzinoshandiswa zvakakurumbira, vachawana mukana wekutarisa mushambadziro, uye kana kutsanangurwa kuri kuita zvakakwana, vachashanyira nzvimbo.
# 9. Shandisa mari yekubhadhara pamapurogiramu (PPC). Icho chiripo chekubhadhara icho chinotumira chitima nechivimbo chekutendeuka. Zvinowanzoitika nzvimbo iyi inowanikwa sechinyorwa chinotsigirwa neimwe yezvinjini dzekutsvaga uye inosvika apo vanhu vachitsvaga mazwi makuru.
# 10. Shandisa SEO. Iyo nzira inobatsira bhizinesi kuti iite panzvimbo yakakwirira pamapeji ekutsvaga majini mapeji. Nzvimbo dzakanaka dzichaita kuti URL dzavo dzigoverwe pakati pevanhu. Usati washandisa SEO, iva nechokwadi chokuti ugare nemitemo yekutsvaga injini.